AMATA GARDEN RESORT REVIEW (INLE) - LODGGY
“မိသားစုလိုက် အဖွဲ့လိုက် တွေအတွက် မီးလှုံ ဖို့ bon fire လုပ်တဲ့နေရာလည်းပါဝင်ပါတယ်”
INFINITY POOL SIDE
အခုလို ချမ်းချမ်းစီးစီး ဆောင်းတွင်းလေးမှာ အင်းလေးကို သွားရောက်အပန်းဖြေအနားယူချင်သူတွေအတွက် Amata Garden Resort နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Garden Resort ဆိုတဲ့အတိုင်း တကယ့်ပန်းဥယျာဉ်အကျယ်ကြီးရှိတဲ့ ဟိုတယ်ပါ။ အခုမကြာသေးခင်က လည်း အခန်းသစ်တွေပါတဲ့ သုံးထပ်ဆောင် အဆောက်အုံသစ်ကိုထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။
Amata Garden Resort မှာ ဆိုရင် ဟိုတယ် အဆောင်ဟောင်းရယ်၊ Dec 2018 နှောင်းပိုင်းမှ စဖွင့်တဲ့ အဆောင်သစ်ရယ် ဆိုပြီး ၂ ခုရှိမယ်။ ဟိုတယ်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ မြေဧကအကျယ်ကြီးမှာ လှပစွာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ ပန်းပင်တွေနဲ့ အတူခေတ်မှီဒီဇိုင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်ကိုတွေ့ရမှာပါ။
ဒီဟိုတယ်မှ ရေကူးကန်ကလည်း ၂ ကန်.. အင်းလေးကန်ကိုမေးတင်ဆောက်ထားတဲ့ရေကူးကန်ရယ်.. အခန်းသစ်တွေဘက်က ရေကူးကန်ကျယ်အသစ်ရယ်ပါ။ အင်းလေးမေးတင်ကန်က သိပ်မကြီးပေမဲ့ နေဝင်ချိန်ဆို အရမ်းလှ။ Infinity Pool ပုံစံဆိုတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် အင်လေးကန်နဲ့တဆက်တည်းလိုလို။ ကန်အသစ်ကတော့ တော်တော်လေးကျယ်တယ်။ ကန်နှစ်ခုလုံးမှာ ဘားကောင်တာငယ်တခုစီပါဝင်ပြီး အချိုရည်/ ယမကာ အတွက်happy hours လည်းပေးထားတယ်။
ညဘက်ဆိုရင် မိသားစုလိုက် အဖွဲ့လိုက် တွေအတွက် မီးလှုံ ဖို့ bon fire လုပ်တဲ့နေရာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ Bonfire နေရာကနေလည်း နေဝင် sunset အချိန်ဆိုအရမ်းလှ။
ကျွန်တော်တို့တည်းခဲ့တုန်းကတော့ အဆောင်အသစ်ဘက်က dining hall ကမဖွင့်သေးလို့ အရင် ရှိပြီးသား Dinning Hall မှာပဲစားခဲ့ရပါတယ်။ အရင် Dining Hall က ခေါင်အမြင့်ကြီးနဲ့ အလည်မှာ အလှကန်လုပ်ထားတော့ တော်တော် ခန်းနားတယ်။
အဆောက်အုံသစ်ဘက်မှာ တည်းတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်ကို သီးသန့် Dinning Room, Meeting Room တွေပါ ပါတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့။ အထပ်မြင့်ကအခန်းတွေဆိုရင် ဓါတ်လှေခါးလည်းပါဝင်ပြီး အင်းလေးကန်ကို လည်းလှမ်းမြင်ရပါတယ်။
နေရာကတော့ ရွာမရွာမှာရှိပြီး ညောင်ရွှေမြို့ထဲနဲ့တော့အလှမ်းဝေးပါတယ်။ ကားနဲ့မောင်းရင် မိနစ် ၃၀ လောက်မောင်းရပါတယ်။ အားသာချက်ကတော့ ကက္ကူ၊ စကား၊ မိုင်းသောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အတော်လေးနီးသွားပါပြီ။ အင်းလေးကန်ထဲကနေ လှေနဲ့လာချင်ရင် လာလို့ရအောင် ကိုယ်ပိုင်လှေဆိပ်လည်းရှိပါတယ်။ မိုင်းသောက်တံတားအကျော် ဟိုတယ်ဇုံထဲမှာပါ။ အင်းလေးကန်ထဲ မှာ ရေစပ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ ရေပေါ်အခန်းတွေတာ့မပါဝင်ပါဘူး။ အေးဆေးစွာ အနားယူချင်သူတွေအတွက်နေရာက အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
New Pool Side Bar
အခန္းအမ်ိဳးစား အေၾကာင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ အေဆာင္ေဟာင္းနဲ႕ အသစ္ဆိုၿပီး ခြဲေျပာေပးပါမယ္။
အဆောင်ဟောင်းက ၃ ထပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီး Deluxe Room, Deluxe Suite Room ၂မျိုးရှိပါတယ်။ အဆောင်ဟောင်းမှာတော့ ဓါတ်လှေကားမပါပါဘူး။ Deluxe အခန်းတွေအားလုံးက Garden View အခန်းတွေပါ။ အခန်းတိုင်းမှာလည်း ခေတ်သစ်၊ခေတ်ဆန်း မြန်မာပန်းချီကားတွေကို အမြတ်တနိုးချိတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Deluxe Suite Room ကတော့ သူအခန်းတခုတည်းရှိတယ်။ Deluxe ၂ခန်းကို အလယ်မှာ ဧည့်ခန်းနဲ့ဆက်ထားပါတယ်။ ရေချိုးခန်းလဲ ၂ လုံးပါတယ်။ သူ့မှာ သီးသန့် ပေါ်တီကို၊ လေသာဆောင် အကျယ်ကြီးလည်းပါတယ်။
အဆောင်သစ်လဲ ၃ ထပ်ဆောင်ပါ။ ဒီဘက်အဆောင်မှာတည်းရတာ ပုံမှန်မြင်နေကျ အင်းလေးမှာသစ်သား ပုံစံနဲ့မဟုတ်ပဲ modern design နဲ့ဆိုတော့ နိုင်ငံခြားbeach resort တခုခုကိုရောက်သွားသလို ခံစားရတယ်။ဒီ ဘက်မှာတော့ အခန်းအမျိုးစား ၂ခုသာရှိပါတယ်။ Royal Deluxe နဲ့ Royal Deluxe Family Room ပါ။ Royal Deluxe တိုင်းက အခန်းပုံစံအားလုံးပုံစံတူဖွဲ့ထားတယ်။ အခန်းတိုင်းက Lake View မြင်ရတယ်။ အခန်းပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့ Swimming Pool View ပါ။ အခန်းအသစ်တွေဖြစ်တော့ အခန်းအားလုံးမှာ Modern Facility တွေပဲသုံးပေးထားတယ်။ ဖုန်းကိုလည်း အိပ်ရာဘေးမှာ အားသွင်းလို့ရအောင် ပလက်ပေါက်တွေထည့်ထားပေးတယ်။ Royal Deluxe အခန်းပေါင်း ၉၀ တောင်ရှိတယ်။
Amata Villa Room
နောက်ဆုံးအခန်းအမျိုးအစားကတော့ Amata Villa ပါ။ Villa ခန်းတွေက စားသောက်ဆောင်နားမှာ သီးသန့် Privacy များများရအောင်ဆောက်ထားတယ်။ Villa အခန်းတွေက ၂ ယောက်ခန်းတွေထဲမှာ အကျယ်ဆုံး။ ဘားကောင်တာမှာ ကိုယ်ပိုင် ကော်ဖီ ဖျော်ဖို့ စက်လည်းပါတယ်။ Bathtube ရော၊ Shower ရောပါတယ်။ လေညှင်းခံဖို့ လေသာဆောင်ကလည်း အကျယ်ကြီး။ ဒီအခန်းတွေမှာ ၂ ယောက်အိပ် ကုတင်ကြီးပဲရှိတယ်။ Honey Moon သွားမဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝ Recommend ပေးတဲ့အခန်းပါ။
အခန်းတွေအကုန်လုံးက fully furnitured ဖြစ်ပြီး tv/ ရေခဲသေတ္တာ/ air con /မီးခံသေတ္တာ စတာတွေအကုန်ပါဝင်ပါတယ်။
Amata ဟိုတယ်တိုင်းမှာ ပါဝင် Nibanna Spa က အနှိပ်ကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးတာ အင်းလေးမှာလဲကောင်းတယ်။ မြန်မာ၊ထိုင်း Massage တွေရတဲ့အပြင် အခြား Amata တွေမှာမရသေးတဲ့ Sauna Room, Steam Room တွေလဲသုံးလို့တယ်။ နေ့လည်ဘက်သွားရင် Discount တွေလည်းရှိတယ်။
မနက်စာ ကတော့ international buffet ဖြစ်ပြီး ရှမ်းစာဖြစ်တဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲ / ရှမ်းထမင်းချဉ်စတာတွေကို ရက်အလှည့်ကျကျွေးပါတယ်။ အရသာကောင်းမွန်ုပြည့်စုံပါတယ်။ Lunch / dinner menu. မှာလည်း set menu ပါရှိသလို ထိုင်းစာ၊ အင်ဒိုနီးရှာစာ ၊ မြန်မာစာတွေလည်း ပါရှိပါတယ်။အရသာကောင်းမွန်ပြီး portion. များပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ dinning place ဟာ သီးသန့်အဆောင် အဖြစ် indoor / outdoor ပါရှိတာဖြစ်ပြီး လူ တစ်ရာနီးပါးကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးနိုင် အောင်ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ အသစ်အဆောက်အုံဘက်မှာ ရှိတဲ့ dinning place ကလည်း pool side area မှာဖြစ်ပြီး သူလည်းအတော်ကျယ်ဝန်းပါတယ်။
အေးအေးချမ်းချမ်း အပန်းဖြေလိုသူတွေအတွက်၊ ဟိုတယ်စည်းစိမ်အပြင့်အဝ ပေးနိုင်လို အထူးသင့်လျော်တဲ့ဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ suite / family room မှ deluxe အခန်းထိ ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
ဖောင်တော်ဦး ဘုရားနဲ့လည်း အတော်ကိုနီးပါတယ်.. မီနစ် ၂၀ လောက်လှေနဲ့သွားရောက် ဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။
ဟိုတည်နေရာက မြီု့ထဲနဲ့ အလှမ်းဝေးတော့ ညဘက် ညနေ ထွက်စားဖို့ သွားရောက်လည်ပတ် ဖို့ကားရှိမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဟိုတယ်ကနေ မြို့ထဲကိုကားဌားခ ကလည်း ၂၀၀၀၀ ကျပ်အထက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။